आफैं बनाउनोस्, मजाले खानोस् ! – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
आफैं बनाउनोस्, मजाले खानोस् !
पोषिलो जुकिनी सुप
‘जुकिनी सुप’ उपभोग गरिने विभिन्न प्रकारका सुपमध्येको एउटा निकै स्वादिष्ट र पोषणयुक्त सुप हो । आजकल नेपालका होटल तथा रेष्टुराँमा यसको मनग्ये लोकप्रियता छ । यो घरमै बनाएर स्वाद लिन सकिने सुप हो । जुकिनी भनेको फर्सीको एक प्रजाति हो । यो लामो आकारको हुन्छ ।
दुईवटा जुकिनीलाई स–साना टुक्रा पारी (क्युब साइजमा) काटिन्छ । त्यसपछि एक टुक्रा भेजिटेबल क्युब, दस ग्राम बटर, मसिनो गरी काटेको एउटा प्याज, चार केस्रा पिसेको लसुन, स्वाद अनुसारको नुन, मसिनो गरी काटेको अजमोद (पार्सली, धनियाँको पातजस्तै देखिने), करिव दुई ग्राम कालो मरिच, ५० मिलिलिटर दूध, एक चिया चम्चा ज्वानो, एक लिटर पानी तयार गरिन्छ ।
यी सामग्री तयार पारिसकेपछि बटरलाई ‘फ्राईङ प्यान’ मा पगाल्ने । त्यसपछि प्याजलाई हल्का रातो हुने गरी फ्राई गर्ने । यसमा पिसेको लसुन पनि थपेर मन्द आगोमा प्याज र लसुन रातो हुने गरी फ्राई गर्ने । प्याज र लसुन रातो भएपछि क्युब साइजमा काटिएको जुकिनीलाई फ्राइङ प्यानमा हालेर मन्द आगोमा करिव दुई मिनेट चलाउँदै फ्राई गर्ने ।
अब जुकिनी भएकै उक्त प्यानमा एक लिटर पानी उमाल्ने । हल्का उम्लन सुरु भएपछि ज्वानो, मरिच र थोरै पानीमा घोलिएको भेजिटेबल क्युब हालेर भक्भकी उमाल्ने । उम्लिएपछि झिकेर कुनै भाँडामा खन्याई सेलाउने । सेलाएपछि मिक्स्चरमा पिसेर लेदो बनाउने । लेदोलाई पुनः फ्राइङ प्यानमा हालेर तताउने ।
तात्दै गरेको लेदोमा दूध हालेर केही बेर पकाएपछि मसिनो गरी काटेको अजमोद हालेर खान सकिन्छ । यसरी तयार भएको सुप मात्रै पनि खान सकिन्छ र यसलाई रोटीसँग खाँदा पनि अत्यन्तै स्वादिलो र पोषणयुक्त हुन्छ ।
बारा विशेष गरी नेवारी संस्कृतिको लोकप्रिय खाजा हो । विभिन्न स्वाद अनुसारका बारा बनाउन सकिन्छ । अण्डा, मासु इत्यादिका बाराको स्वाद कम मिठो हुँदैन । बारा घरमै बनाउन सकिने परिकार हो । जानौं, बारा बनाउने विधि–
बारा आवश्यकताअनुसार बनाउन सकिन्छ । यो बनाउनका लागि आधा किलो मास, ठूलो चम्चाको तीन चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट, एक चिया चम्चा जिराको दाना, स्वादअनुसारको हरियो खुर्सानी र नुन तयार गरिन्छ । त्यसैगरी, आधा चिया चम्चा लोकल सुपको दानाको पेस्ट, आवश्यकताअनुसार तोरीको तेल तयार पारिन्छ ।
तयार पारिएको मासलाई एक रात भिजाएर बोक्रा सबै फालिन्छ । बोक्रा फालिएको मासलाई राम्ररी सफा गरेर पिसिन्छ । पिसिएको मासको पिठोमा पानी हालेर लेदो बनाएपछि यसमा तयार पारेर राखिएको मसला मोलिन्छ । राम्रोसँग मोलेपछि चुलोमा तावा बसालिन्छ । तावा तातिसकेपछि एक चम्चा तोरीको तेल हालिन्छ ।
त्यसपछि मसला मोलिएको मिश्रित लेदोलाई इच्छाअनुसारको आकारमा डाडुले फिँजाउने । अण्डा–बारा बनाउन भने अण्डालाई फुटाएर बाराको बीच भागमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि मन्द आगोमा नडढाई राम्रोसँग छोपेर पकाइन्छ ।
अमलाको अमिलो अचार सम्झँदा पनि जिब्रै रसाउँछ । खाँदा स्वादिलो नहुने कुरै भएन । अमलाको अचार स्वादका हिसाबले मात्रै होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अत्यन्तै लाभदायक छ ।
अचार बनाउनका लागि आवश्यकताअनुसार अमला तयार पार्ने । एक किलो अमलाको अचार बनाउनका लागि सुपको दाना १०० ग्राम, धनियाँको दाना ५० ग्राम, जिरा ५० ग्राम, चम्सुरको दाना ३० ग्राम, नुन दुई चम्चा, बेसार एक चम्चा, हरियो खुर्सानी २० ग्राम, तोरीको तेल ३०० मिलिलिटर, सुकेको लसुन २०० ग्राम, अदुवा १०० ग्राम, रायोको दाना ५० ग्राम, जिरा पाँच ग्राम, टिम्मुर ५ ग्राम, हिङ ५ ग्राम, पिसेको मुलाको दाना १५ ग्राम, एक पात तेजपत्ता तयार पार्ने ।
अमला र खुर्सानीलाई सफा पानीले पखालेर ब्लान्चिङ गर्ने (उम्लेको पानीमा २–३ मिनेट डुबाएर पानी तर्‍याउने) । त्यसपछि जिरा, धनियाँ, सुप, चम्सुर, रायोको दाना छुट्टा–छुट्टै भुटेर पिस्ने । पिसिएका मसलालाई एउटा भाँडोमा राख्ने । खुर्सानीलाई बीचबाट काटेर गोलो–गोलो टुक्रा बनाउने । अमलालाई सिलौटामा राखेर थेप्चो हुने गरी लोहोराले थिच्ने । थेप्चिएको अमलामा चारैतिरबाट मसला छिर्न सहयोग मिल्छ, जसका कारण अचार स्वादिलो त हुन्छ नै बिग्रने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
अब यसरी थिचिएको अमलालाई एउटा बाटामा राख्ने । त्यसपछि सो अमलामा तयार पारी राखिएको खुर्सानी, मसलाको धुलो, नुन, बेसार, तोरीको तेललगायतका सामग्री हालेर राम्रोसँग मोल्ने ।
मरमसलामा मोलेको अमलालाई सफा सिसाको भाँडामा राम्रोसँग बिर्को लगाएर खाँदेर राख्ने । आवश्यकताअनुसार घाममा पनि राख्नु उचित हुन्छ । करिव एक हप्ता घाममा राखिसकेपछि अमलाको अचार खान सकिन्छ । त्यसो त घाममै नराखे पनि खान सकिन्छ तर घाममा राख्दा भने अझ बढी स्वादिलो हुन्छ र लामो समयसम्म राखेर खान पनि सकिन्छ ।
चिकेन रोस्ट नन्भेजिटेरियन व्यक्तिका लागि स्वादिलो मासुको आइटम हो । यो परिकार होटल तथा रेस्टुराँमा लोकप्रिय छ । यो आइटम घरमै बनाउन सकिने सहज विधि छन् ।
एक किलो चिकेनको रोस्ट बनाउनका लागि १५० मिलिलिटर ओस्टर सस (एक किसिमको सस), २५० मिलिलिटर तेल, स्वादअनुसारको नुन, खुर्सानी, मरिच तयार पारिन्छ । ४० ग्राम रोजमेरी र ओस्टर सस बाहेकको अरु कुनै सस तयार पार्ने । चिकेन रोस्ट बनाउँदा टुक्रा पारिएको गाजर, लसुन, प्याज पनि हाल्न सकिन्छ । यस्ता मसला तथा तरकारीले चिकेन रोस्टलाई थप स्वादिलो बनाउँछ ।
चिकेन रोस्ट बनाउनका लागि आवश्यक सामग्री तयार पारिसकेपछि चिकेनको भित्राङ्स (आन्द्रा–भुँडी लगायत) निकालेर राम्ररी सफा गर्ने । सफा गरिएको सिङ्गो चिकेनमा नुन, मरिच, ओस्टर सस, रोजमेरी र तेल लपक्क हुने गरी पोत्ने । त्यसपछि रोस्ट गर्ने भाँडाभित्र मुनिबाट तरकारी तथा मसला (गाजर, लसुन, प्याज) का टुक्रा राख्ने । त्यसमाथि तयार पारिएको चिकेन राख्ने ।
भाँडामा राखिसकेपछि पनि चिकेनको वरिपरि तरकारीका टुक्रा राख्ने र भाँडालाई माइक्रोवेभ ओभनमा राख्ने । ओभनलाई १८० डिग्री सेल्सियस तपक्रमा करिव ४५ मिनेट राखिसेकपछि चिकेन रोस्ट तयार हुन्छ । यसरी तयार भएको चिकेन रोस्टलाई इच्छाअनुसारका टुक्रा बनाएर वा नटुक्र्याईकन पनि खान सकिन्छ ।